विदेशमा चम्किँदै नेपाली ब्रान्ड, कुन कुन छन् लोकप्रिय? - HKNepal.com - First Nepali Internet Magazine Hong Kong | एचकेनेपाल डट कम
विदेशमा चम्किँदै नेपाली ब्रान्ड, कुन कुन छन् लोकप्रिय?
काठमाडौं – नेपालमा अधिकांश वस्तु विदेशबाट आयात हुन्छ । तर, कतिपय यस्ता नेपाली उत्पादन पनि छन् जसले विदेशमा पनि राम्रो पहिचान बनाएका छन्।
वाइवाइ चाउचाउ नेपालीको मात्र होइन, तीन दर्जन मुलुकका भान्सामा पाक्छ । गोल्डस्टार नेपालमा भन्दा भारतमा बढी चर्चित छ। नयाँ पत्रित्रकामा खबर छ।